आफ्नै सरकार, सडकमा तारवार : ‘आइ लव यू केपि बा !’ स्टिकर टाँगिएको निधार - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ असार २७, आईतवार १८:१५
नेकपा एमालेको अध्यक्ष एबम् प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा अहिले केपी शर्मा ओलीले राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् ।
राज्य सत्ता र पार्टि सत्ता दुवै हातपारेको एमाले समर्थक युवासंघ आइतबार सडकमा ओर्लियो । जुन सडकमा राज्यका सुरक्षा दस्ता काँडेतार लगाएर बाटो छेकेको देखिन्थ्यो । सरकार चलाएर देश र जनताको पक्षमा रहेको दल र त्यसका समर्थकहरु निधारमा ‘आई लभ यु केपी बा !’ भन्दै नारा लगाउँछन् । प्राय सत्ता बाहिर भएका राजनैतिक पार्टि वा दलले गर्नुपर्ने कर्म सत्तापक्षले किन गर्नुपरेको होला भन्ने, यो नारा, सडकको जुलुस र त्यसका समर्थकहरुको हर्कतमा प्रश्न उठाएको छ ।
सत्ता सञ्चालनमा एक्लै परेको प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टि आफै विभाजनको खटपटमा गुज्रिएको छ । एउटै पार्टिभित्रको असन्तुष्टि, फरक विचार र द्धन्द्धका कारण सत्ता कमजोरहुँदै गएको अवस्थाको कारण होला, सडकमा ओर्लेको युवासंघ नेपालका नेता समर्थकहरु गुटगत नारा लगाउनुपर्ने र सडकको काँडेतार पन्छाउँदै सडक नारा लगाउनुपर्ने बाध्यकारी इतिहास रचना गर्नुपरेको ।
दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरि दलीय रुपमा आफ्नै कर्मको खोटले घेराबन्दीमा परेको ओली समुह (एमाले) आफ्नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफ्नै पार्टिको नेपाल-खनाल समुह सर्वोच्चमा मुद्धाहाल्न पुगेको छ । अदालतले फैसला सुनाउन लागेकै पूर्वासन्ध्यामा युवासंघले राजधानीमा प्रदर्शनलगायत आफ्नो गतिविधि बढाउनुको रहस्यमाथि अहिले चर्चा परिचर्चा भएरहेको छ ।
त्यत्तिमात्र होइन एउटा कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार, आफ्ना नीति शिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति खास चिन्तन गरेको देखिन्न । यद्यपि, सत्ता टिकाउका लागि उसको समर्थकहरुको रोदन प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर अंकित स्टिकर निधारमा बनाएर सडकमा देखिए । यो भिन्नै चर्चाको कुरा छ ।
अझैसम्म पार्टिसत्ता र राज्यसत्ता आफ्नै भएकोबेला त्यसका समर्थकहरुलाई के पुगेन होला ? पूरा हुनुपर्ने जायज मागहरु कोद्धारा पूरा गराउन सडकमा नारा लगाउन पर्ने भयो होला ? राम्रो गरेको भए जनताले त्यसको आफ्नै ठाउँबाट समर्थन गर्नेछन् । तर युवासंघका नाममा निधारमा स्टिकर लगाएर प्रधानमन्त्रीले सडकको काँडेतार छिचोल्न कार्यकर्तालाई लाईन लगाउनुको औचित्य के होला ?
आफ्नै पार्टिको कचकचबाट उछार नपाएको एमाले र ओली समुहले राजधानीमा आइतबार गराएको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले केपी ओली राजनेता भएको दावी गरे । उनको पक्षमा नाराबाजी समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय झण्डा र ओलीको ठूलो फोटोसमेत बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले ‘आई एम विथ केपी’ भन्न भ्याए ।
‘कथनी र करनीमा समग्रता नपाएको राज्यपक्ष’, उसका समर्थक र गुटका मान्छेहरुलाई अन्य पक्षको समर्थन नहुनुको छटपटि सडकमा पोखिएको सामान्य नागरिकले महसुस् गरेका हुनुपर्दछ । औचित्यहिन सडकप्रदर्शन त्यो पनि सत्तापक्षका तर्फबाट त्यसको खास उत्तरप्रति मौनता आफैमा अन्तरमनको हास्यस्पद कथा हुनुपर्दछ । भलो गरे सबैलाई उत्तम हुन्थ्यो । नेपालको राजनीतिमा हलो अड्काएर, कलो घिच्ने प्रणाली, पद्धति र संस्कृतिले दुखपाएको रहस्य सडकमा हुत्तिएको, आजको जुलुस र प्रदर्शनले आफै बोल्छ ।
एकलकाटे नेता, पार्टिसत्ताको दुरुपयोगको हैसियत र त्यसको परिणाम नेपालको राजनीतिमा उजागर भइरहेको नेपाली नागरिकहरुको सही भोगाई होला । कसैलाई सहज समर्थन जस्तो लाग्ला, कसैलाई यो विधि पद्धति ठीकै हो जस्तो गरि अन्धासमर्थकहरुको आत्मरति उत्तिकै होला । तर देश र जनताको सेवा, सुविधामा स्वयंसेवी बन्न नसकेको देशको राजनीतिले दुनियाँ हँसाईरहेको बेला, असारे झरीमा गरिएको पर्दशन त्यसको बिम्वात्मक हास्यव्यङ्ग्य नै थिए । जो राजधानीवासीले देखेर हाँस्न पाए । यहाँभन्दा थप औचित्य खास रहन्न ।
आज १ हजार ८३१ मा कोरोना पुष्टि